SIDA LOO ILAALIYO DABACASAHA XILLIGA QABOOBAHA EE AQALKA KU YAAL DABAQYADA IYO XIDIDADAHA: SIYAABAHA UGU WANAAGSAN EE SI HABBOON LOO HIRGELIYO XIDIDKA, SI AYSAN U DHICIN ILAA INTA SUURAGAL AH - KHUDRADDA
Xaggee iyo sidee ayaad u badbaadin karootada xilliga qaboobaha guriga dhexdiisa?
Karootada waa khudradda asaasiga ah ee lagu qiimeeyo qaab-dhismeedkooda iyo tiro badan oo faa'iido leh.
Sababta oo aan sabab u lahayn degganaha xagaaga oo dhan dhowr sariirood oo ka hooseysa karootada - khudradda waa wax aan la qabin marka la eego beerashada, laakiin waxaa si xoog leh u nugul duufaanka iyo u dabbaalanayo jiilaalka.
Si habboon u ilaalinta dabacasaha mararka qaarkood way ka adag tahay marka loo koro. Laakiin habka saxda ah, dalagga xididku kuuma siin doono dhibaato oo hayn doono guryaha faa'iidada leh.
Si xidid si fiican loo ilaaliyo ilaa guga, waa inay lahaataa qaab dhismeed iyo halbeeg gaar ah. Karootada loogu talagalay kaydinta waa inay lahaataa boqolkiiba qiyaasta adag, sonkorta iyo carotene.
Qodobka dabacasaha, ka badan kuwa u adkaysta waxay u tahay bakteeriyada cudurada iyo jeermisyada keena in ay sii xumaato badeecadda.
Fikrad gaar ah waa in la bixiyaa qaabka khudradda. Beerta khibrad leh ayaa sheegta in dabacasaha qiyaasta dhexdhexaadka ah iyo qaabka furan ee ugu fiican lagu hayo. Waa wax aan la aqbali karin in la dhigo karootada waxyeello foosha, qoyaan, jarista. Waxay noqon doontaa mid si dhakhso ah aan loo isticmaali karin waxayna ku dhici kartaa "cudurro" dalag caafimaad qaba.
Dhammaan noocyada dabacasaha ah kuma habboona kaydinta muddada dheer. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee tilmaamaya awoodda xididka muddo dheer si loo ilaaliyo tayada waxtar leh iyo in aan la sii xumayn, waa tayada haynta. Taas bedelkeeda, waxay ku xiran tahay heerka daaqsinka dabacasaha iyo taariikhda qiyaasta goosashada.
Mabda'a ugu weyni waa tan: markii danbe la kariyay, dabadeedna dib udhacay, muddada dheer waxay socon doontaa. Sidaa darteed, waxaa haboon in la doorto noocyo goor dambe-Bisaylkiisa ama noocyada bisaylka dhexdhexaad ah.
Karootada xaraaradda leh ee tayo fiican leh - Valeria, Forto, Vita Long, Moscow Winter, Karlen, Flaccoro.
Karootada xilli-ciyaareedka - Nankee-Nantes-4 iyo Callisto - waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu fiican ee loogu talagalay jiilaalka.
Late bislaan noocyo hybrid - Tinga F1, Totem F1. Marka lagu daro tayada haynta, waxay leeyihiin dhalid aad u fiican.
Waa muhiim! Karootada loogu talagalay kaydinta xilliga jiilaalka waa in la soo saaraa oo goosan wakhtiga. In xidid weyn, caleemaha hoose ee dushooda bilaabay inay qalalaan.
Ku saabsan noocee ay ku habboon yihiin kaydinta, lagu sharraxay faahfaahin halkan.
Maqaasi waa kaydinta xilliga jiilaalka ee dabacasaha. Si kastaba ha noqotee, waxay khuseysaa kaliya guryaha gaarka loo leeyahay. Hase yeeshee, kuwa leh ciyaraha, caleemaha ama garaashyada leh maqaasiinka qalabaysan ayaa adeegsan kara habka. Mararka qaar milkiilayaasha guryaha ayaa ku yaal dabaqyada ugu horreeya ee guryaha ay maamusho "sahayd" oo leh saldhig u ah kaydinta khudradda iyo diyaarinta guriga.
Xaalado gaar ah waa in lagu arko Maqaasi: heerkulka ugu fiicani wuxuu kudhowaad yahay 2 digrii oo qoyaanka qoyaanka ah 90-95%. Qolka waa in la neefsado, laakiin iyada oo aan la siin hawo degdeg ah oo hawada, haddii kale biqilka dushooda ayaa bilaabi doona.
Sidee baad u kaydsan kartaa Maqsin:
In sanduuqyo alwaax ama alaab culus leh dabool leh - Waxaa la dhigayaa meel yar oo ka ilaalisa qoyaanka, 15 cm ka fog derbiyada.
Onion Husk - dabacasaha waxaa la geeyaa bacaha waaweyn, oo ku rusheeyaa dhogor, kadibna bacda kasta waa in lagu xiraa.
In balka baaxad weyn - sanduuqyada iyo weelasha kale ee la isticmaalo, dabacasaha iyo cirbadaha ayaa la dhigay layers.
Isku dar ah ciid qoyan iyo faaruq - walaxda ayaa lagu shubay sanduuqa, halkaas oo ay ku dhajiyaan karootada leh weel qaro weyn leh.
Bacaha bacaha - bacda ayaa dhawr meelood oo dusha sare ka dhigaya hoose ee qoyaan-biyoodka, ku rid dalagga ku yaal xayndaabka iyo saldhigyada, adoo xiraya baakooyinka.
Halkee ayaa ugu fiican?
Halkee ayaa ugu fiican ee lagu hayo dabacasaha iyo xididada guryaha magaalada? Milkiilayaasha guryaha way adag yihiin in la keydiyo karootada illaa guga oo dooro meel ay ku qoraan khudradda. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo lagu keydiyo dalagyada beeraha ee guryaha:
Loggia glased or balcony - waxay noqon karaan kuwo beddel u ah maqaasiinka. Xaaladdan, waxaad isticmaali kartaa hababka loo isticmaalo kaydinta hoose.
Goobaha deyrka la ilaaliyo oo la ilaaliyo.
In gasacadaha foomka qalajiyey.
Sidee loo sameeyaa tan?
Habka ugu fudud ee loo keydiyo karootada si aysan u dhicin ama u xumeynin waa inay ku ridaan loggia ama balcony. Laakiin taasi waxay u baahan tahay inaad xakameyso xukun adag. Haddii qolku barafaynayo, dalagga ayaa jabin doona, inuu cunno u qalmo. Haddii balakoonka diirran yahay, khudaarta si deg deg ah ayay u dhaqmi doonaan oo ay dhacaan.
Fursadaha kaydinta ee balakoonka:
Karootada waxaa lagu duubaa sanduuqyada alwaax ama alaabta wax lagu duubo, midhaha kalena waa inaysan taaban. Waa inaad sidoo kale diyaarisaa ciid qoyan iyo iyaga oo xididdada ku shub.
Mararka qaar ash ayaa lagu qasi karaa ciid - waxay leedahay guryaha bakteeriyada.
Sanduuqyada ku dhaji khudaarta cagaarka ah ee aan la dhaqin ee lakabyada - lakabka kasta waxaa loo rogaa wargeysyada. Sanduuqa waxaa lagu daboolay dusha sare ee caag ah si loo ilaaliyo heerarka ugu wanaagsan ee qoyaanka, xagga sare - maro adag.
Habka karootada goosashada ee diirka basasha, oo la mid ah kaydinta Maqsin, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha guryaha. Laakiin xaaladdan, khudaarta ayaa laga yaabaa in ay waqti ka baxaan.
In sanduuq alwaax ah si dabiici ah ku habboon dabacasaha aan loo baahnayn. Sanduuqa waxaa si taxadar leh loogu duubay maqaarka si ay hawada iyo qorraxda qorraxdu u dhacaan gudaha. Awoodda ugu sareysa waxaa lagu dabooli karaa dareemid.
Diyaarso xalka khafiifka ah ee dhoobada. Miro kasta waxaa lagu rusheeyaa dhoobada, oo la qalajiyey hab dabiici ah, oo ku duubnaa bac caag ah, xiran. Dhoobada waxay abuureysaa shub aan la jarjarayn oo ka hortagaya qalajinta iyo dhexdhexaadinta jeermiska Ka dhigaya xal dhoobo, dhoobada ayaa biyo ka buuxsantay - markii ugu horeysay ee barar, marka labaad - maalin gudaheed, ka hor inta aan la samayn qaabka dareeraha ah.
Paraffin waxay kaa caawineysaa inaad xajiso karootiga waqti dheer. Waxay u dhaqantaa sidii dhoobo. Waxaa lagama maarmaan ah in la yiraahdo qiyaasta ku filan ee paraffin (sida waafaqsan xaddiga dalagga), hoos u dhig dalagga dalagga, ka saar oo qalaji. Sidaas darteed waxaad ka dhigi kartaa banaan ma aha oo kaliya kaydinta on loggia, laakiin sidoo kale in qaboojiyaha.
Root dalaggu wuxuu ballaariyey sanduuqyada kartoonada leh xididdada malayga. 20kii miroodba, 1 rhizome dhexdhexaad ah ayaa la qaadaa oo si siman loo qaybiyaa taangiga. Badeecadda waa in si adag loo xiraa inta lagu jiro kaydinta.
Dhirato dhowr ah (2-3 xabbo) iyo hal xidid malayga yar ayaa lagu duudduubay filim duufaan ah waxaana lagu dhejiyaa balakoonka ama loggia weel kasta.
Maadada waxaa ka buuxsamey lakabka 3-5 cm ee hoose ee sanduuqa qoto dheer, ka dibna dabacasaha la dhajiyay, lakabka kale ee balka (1-2 cm) ayaa la dhigayaa on top, iyo sidaas ilaa ilaa weelka ka buuxsamay.
Ku keydinta bacaha qaboojiyaha qaboojiyaha ma awoodo inuu ilaaliyo casriga iyo kalsoonida xididada muddo dheer. Laakiin habkan waxaa loo isticmaali karaa haddii aad rabto inaad ilaaliso beergooyska, tusaale ahaan ilaa fasaxyada sannadka cusub. Karootada waxaa la dhigaa bacaha aan la karinayn oo lagu meeleeyaa qaboojiyaha ama balakoonka.
Milkiilayaasha qaarkood waxay tijaabiyaan oo isticmaalaan dhawr habab oo kayd ah hal mar. Tusaale ahaan, sanduuqyada lagu keydiyo kabaha ama xididdada dhoobada-la qalajiyey ayaa la dhigayaa ciidda.
Haddii dabacasaha yar yahay, waxaad isticmaali kartaa qolka kaydka loogu talagalay.. Ka hor marin karootada, ka saarida wasaqda xad dhaafka ah iyo carrada, ku duub miro kasta oo wargeys ah oo ku rid si aan macquul ahayn sanduuqyada.
Hab kale oo lagu keydiyo waxaa loo yaqaan habka qalajinta. Waxaad qallajin kartaa khudradda habka dabiiciga ah - dibedda hawo qorrax leh oo qalalan. Waxaadna isticmaali kartaa qalabka jikada - microwave, foornada, qalajiyaha korantada. Marka laga baxo qaybaha la jajabiyey oo laga dhigi karo muddo dheer bangiyada caadiga ah ee daboolaya.
Sida loo dhigo karootada qaboojiyaha, nambarka 1aad:
Sida loo dhigo karootada qaboojiyaha, nambarka 2aad:
Sidee loo hubiyaa casriga khudradda muddo dheer?
Si aad u ilaaliso karootada sida ugu dheer ee suurtagal ah, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u diyaariso beergooyska:
Karootada si adag ayaa loo mamnuucay in la dhaqo (ku saabsan haddii la maydho dabacasaha keydinta, halkan ka akhriso). Kaliya marka laga reebo waa khudaarta qalajinta iyo barafka.
Dufcadda oo dhan dabacasaha si taxadar leh ayaa loo baaraa. Miraha dillaacsan, lafdhabarka ah, ama khatarta ah ayaa ku xiran diidmada.
Noocyada kala duwan ee la kala soocay wax yar baa la qalajiyey hab dabiici ah. Better - ee dabaysha, oo aan qorraxda tooska ah ku jirin. Waa lagama maarmaan mararka qaarkood si ay u noqoto midhaha.
U fiirso heerkulka iyo qoyaanka qolka kaydinta.
Tababbarradu waxay tusinaysaa iyadoo ku xiran tiknooloojiyada diyaarinta iyo keydinta xididka, karootada waxaa lagu keydin karaa:
1 sano - isticmaalka paraffin, dhoobo;
badh sanadkii - bacaha leh diirka basasha, sanduuqyo ciid, ash ama balka;
2-4 bilood - bacaha balaastigga ah;
1-2 bilood - qaboojiyaha.
Waa maxay sababta khudaarta loo jarayo?
Milkiilayaasha badankood waxay sameeyaan khaladaadka caadiga ah marka kaydinta dalagyada dalagga. Tani waxay keenaysaa in ay sii xumaato badeecadda, lumitaanka dhadhanka iyo guryaha waxtarka leh.
Waa maxay sababta dabacsan? Qoyaan sare oo gudaha ah. Xaaladdan, kondensatadu waxay ku urursataa midhaha iyo xanuujinta fiditaanka microbes.
Xalka: in la qalajiyo qolka, qalabka taagan sanduuqa ama boorsada, si qaas ah loo xalliyo midhaha.
Waa maxay sababta dhalidda miraha? Shuruucda kudarka gooyo ama xaaladaha heerkulka (qolku aad ayuu diiran yahay) lama raacin.
Xalka: gooyo dusha sare ee jirka, u guuri qolka qaboojinta, si joogta ah u baadha goobta shaqada iyo xalliso.
Waa maxay sababta dabacasaha dabacsan? Xadgudubyada xeerarka shirarka iyo qallajinta khudaarta cagaaran, dabacasaha qorraxda qorraxda ku jirta ama la ururiyey waqti hore.
Xalka: Soodhaweyno khaladaadaheena waxaanan ka hortagaynaa xaalad la mid ah sanadka soo socda.
Laguma talin in lagu keydiyo karootada qol isku mid ah oo leh tufaax. Miraha qarsoon ee ethylene, taas oo horseedaysa sii xumaan ee dabacasaha.
Khudaarta cagaaran ee koray isla mudadaas oo si xoogan loogu soo koobay Bacriminta nitrogen ayaanan la kaydin waqti dheer.
Booska wakhtiga u dhexeeya goosashada iyo kaydinta waa inay ahaato mid hooseeya - dhawr maalmood.
Si fiican u keydiyay miraha qaro weyn iyo casiir leh, iyo yar iyo dhuuban si fiican u cuni kara goor hore.
Kaydinta karootada ma aha hawl fudud, laakiin waa la samayn karaa. Adeecitaanka xeerarka goosashada iyo kaydinta, waxaad siin kartaa toddoba fitamiin jiilaalka oo dhan.